Fihaonamben’ ny UCCIOI: sehatra malalaka fiaraha-miasa sy fifanakalozana | NewsMada
Fihaonamben’ ny UCCIOI: sehatra malalaka fiaraha-miasa sy fifanakalozana
Natao teto Antananarivo, teny amin’ny Village Voara, Andohatapenaka, nandritra ny telo andro nifarana omaly, ny fihaonambe faha-11 ny Vondron’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria aty amin’ny Nosy ranomasimbe Indianina (UCCIOI).
Fiaraha-miasa, fiaraha-miombon’antoka, fifanakalozana. Ireo, raha fintinina, ny votoatin’ny fihaonana avy amin’ny faritra enina (i Maurice, i Seychelles, i Comores, i La Réunion, i Madagasikara, sy faritra Afrika sasany manodidina ny ranomasimbe Indianina). Efa najoro ny taona 2005 io UCCIOI io, miara-miasa amin’ny AFD, ny CCCI-France, ny Vondrona eoropeanina (UE), ny CCI France Madagascar, ny OIF sy ireo Nosy lavanila. 2,4 tapitrisa euros ny avy amin’ny UE hanamafisana izay fiaraha-miasa izay eo amin’ny sehatry ny fihariana rehetra.
Raha ny zavatra tsikaritra, saika ny fiantsoana fiaraha-miasa eo amin’ny samy orinasa sy mpandraharaha ny ambentin-dresaka. Na izany aza, “misy ny sehatra malalaka ahazoana mifandray amin’ny alalan’ny tambajotra serasera (www.oceanindien.biz), tsy voatery handraisana fiaramanidina. Ao amin’io tambajotra io avokoa ny vaovao tsara ho fantatra ho an’izay maniry ho mpikambana”, hoy i Pascal Plante, filohan’ny UCCIOI.
« Mino isika fa izao fihaonambe izao, toy ny mametraka vato fototra Davos aty amin’ny ranomasimbe Indianina », hoy ihany i Pascal Plante. (i Davos : tanàna kely iray any avaratr’i Suisse, fanaovana fihaonambe eran-tany isan-taona momba ny toekarena). Manamarina izay nambaran’ny filohan’ny UCCIOI izay ny fiaraha-mijery ny tontolon’ny toekarena sy ireo olana aty amin’ny ranomasimbe Indianina.
Maro ny seha-pihariana azo ifanarahan’ireo Nosy mpikambana, hitrandrahana ny tsena any Afrika hatrany Eoropa. Nisy tamin’ireo mpivory ny nandroso hevitra hisokafana any Azia. Manana tolotra rehetra ilain’ireo tsena ireo, indrindra isika eto Madagasikara, saingy na ny tsena ato anatiny aza, tsy voafehy noho ny antony maro.
Nandray anjara fitenenana koa ny Fikambanan’ny seranan-tsambo aty amin’ny ranomasimbe Indianina sy ny Business Bridge Ocean Indien, sampana iray mpanelanelana na mitsara ny fifanolanana mety hisy. Hamoraina ho an’ireo mpandraharaha ny fandraharahana. Izay ny azo ilazana ny tanjona napetraky ny UCCIOI.